I-Valence ngokuqhelekileyo inani lamakhethoni afunekayo ukuzalisa igobolondo elingaphandle. Ngenxa yokuba kukho ngaphandle, inkcazo ngokubanzi yesigenali yinyani yamathethoni apho i-athomu enikwe ngokubanzi iimbophelelo okanye inani leebhondi iifom ze-atom. (Cinga isinyithi , esinokuba ne-valence ye-2 okanye i-valence ye-3.)
Inombolo ye-IUPAC ye-valence yinto ephakamileyo yee-atom ezingafaniyo ezingadibanisa ne-athomu.
Ngokuqhelekileyo, inkcazo isekelwe kwinani eliphezulu le-athomu ye-hydrogen okanye i-atylorine. Qaphela ukuba i-IUPAC kuphela ichaza ixabiso elilodwa le-valence (ubuninzi), ngelixa ama-athomu ayaziwa ukuba anakho ukubonisa ngaphezulu kwevini enye. Ngokomzekelo, ubhedu ngokuqhelekileyo kuthwala i-valence ye-1 okanye-2.
Imizekelo: I-athomu yekhamera engathathi hlangothi ine-electron i-6, kunye ne- shells ye-electron shell 1s 2 2s 2 2p 2 . I-Carbon ine-valence ye-4 ukususela kwi-4 i-electron iyakwamkelwa ukuzalisa i-2p orbital .
I-Atom zezinto ezikwinqanaba eliphambili letafile yexesha elifanelekileyo zingabonisa i-valence phakathi kwe-1 no-7 (ukususela ngo-8 yi-octet epheleleyo).
Iqela 1 (I) - Ngokuqhelekileyo ibonisa i-valence ye-1. Example: Na kwi NaCl
Iqela 2 (II) - I-valence yesiqhelo ngu-2. Umzekelo: Mg kwi-MgCl 2
Iqela le-13 (III) - I-valence esebenzayo ngu-3: Umzekelo: Al kwi-AlCl 3
Iqela 14 (IV) - I-valence esebenzayo ngu-4. Umzekelo: C kwi-CO (i-bond bond) okanye i-CH 4 (ibhondi enye)
Iqela le-15 (V) - Iipalence eziqhelekileyo zi-3 kunye no-5. Imizekelo i-N kwi-NH 3 ne-P kwi-PCl 5
Iqela le-16 (VI) - Iiventi eziqhelekileyo zi-2 kunye no-6. Umzekelo: O ku-H 2 O
Iqela le-17 (VII) - Iipalence eziqhelekileyo zi-1 kunye no-7. Imizekelo: Cl kwi-HCl
Valence vs State Oxidation
Kukho iingxaki ezimbini nge "valence". Okokuqala, inkcazo ingabonakali. Okwesibini, liphela inani elipheleleyo, ngaphandle kwesibonakaliso sokukunika nawuphi na umqondiso ukuba i-athomu izakufumana i-electron okanye ilahlekelwe yayo.
Ngokomzekelo, i-valence zombini i-hydrogen kunye ne-chlorine yi-1, kodwa i-hydrogen isoloko ilahleka i-electron yayo ibe ngu-H + , ngelixa i-chlorine ifumana i-electron eyongezelelweyo ibe yi-Cl - .
Isimo se-oxidation yikhombisi engcono yesimo sekhompyutheni ye-athomu kuba ibukhulu kunye nomqondiso. Kwakhona, kuqondwa ukuba iathom zezinto zingabonisa iindawo ezahlukeneyo ze-oxidation ngokuxhomekeke kwiimeko. Uphawu lukhangele i-athothi ye-electropositive kunye ne-negative for atomes of electronegative. Iimeko eziqhelekileyo ze-oxidation ye-hydrogen yi-+8. Iimeko eziqhelekileyo ze-oksidiyali ye-chlorine yi--1.
Igama elithi "valence" lachazwa ngo-1425 ukusuka kwisiLatini igama elithi valentia , elithetha amandla okanye amandla. Ingqiqo ye-valence yaveliswa kwisiqingatha sesibini senkulungwane ye-19 ukuchazela ukuhlanganiswa kweekhemikhali kunye nesakhiwo se-molecular. Iingcamango ze-valence zamachiza zacetyiswa kwiphepha le-1852 lika-Edward Frankland.
Inkcazo yeSisa soBungqina kwiFizikiki kunye neKhemistry
Ukuguquka kweGlasi yokuTshintsho Inkcazo
I-Anion Inkcazo kunye nemizekelo
Isebenza njani i-Blue Lava
Inkcazo yokuguqulwa Inkcazo kunye nemizekelo
I-Amino Acid Inkcazo
RT Inkcazo kwiKhemistry
I-Fractional Distillation Inkcazo kunye nemizekelo
Ibali likaDaniyeli kwiNtonga yeengonyama
Ngaba Ufanele Ufumane Umntwana Wakho Inombolo Yokhuseleko Lentlalo?
I-Balance Beam kwi-Women's Artistic Gymnastics
I-Buraku - "Engenakuthenjwa" yaseJapan
I Diamond Zone
Funda ukubala Iinguqu zePesenti
I-Niels Bohr - Iprofayili ye-Biographical
Solicitar la visa americana que previamente ha sido negada
Imfazwe yaseFranco-Prussian: iDreyse Needle Gun
'Umthi Ukhula eBrooklyn' Iigama Zigama
Indlela yokudibanisa "Croître" (ukukhula)
Unamandla oLwezi lweNyanga
Ubungqingili kunye nezikolo zesini esingatshatanga
I-Corvette History ngeZizukulwana
Imfazwe Yeminyaka Emakhulu: Imfazwe yeCastillon
Isigama magama ukuba wazi kwi Pearl
Ukudala indawo eyiyo yokuFunda